नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदी | रिपोर्टर्स नेपाल रिपोर्टर्स नेपाल
Tag: नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदी
अपराध अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरी कति सफल ?
साउन १४, काठमाण्डौ । अपराधिक घटना पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्न नसकिएला । तर न्युनिकरण गर्न अवश्य सकिन्छ । यसका लागि नेपाल प्रहरीको भूमिका प्रभावकारी बन्नुपर्छ
आईजिपीले गरे सडक सभ्यताको कुरा, ट्राफिक लाईटको व्यवस्था गरिने
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका महानिरिक्षक सर्वेन्द्र खनालले आम नागरिकको साथ सहयोगबिना सडक सभ्यतामा अभिवृद्धि साथै दुर्घटना न्युनिकरण सम्भव नरहेको बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित शान्तिपूर्ण एवम् सुरक्षित समाजका लागि
मोटरसाइकलमा पेस्तोलसहित दुई पक्राऊ
मोरङ, ९ असार । मोटरसाइकलमा पेस्तोलसहित हिंडेका दुई जनालाई प्रहरीले पक्राऊ गरेको छ । आइतबार साँझ बेलबारीबाट अशोक राई र कन्सा माझी दुईवटा पेस्तोल, म्याग्जिन र १४ राउन्ड गोलीसहित पक्राऊ
लक्ष्मी मार्ने कलियुगकी सीता
उदयपुर, ८ असार । लक्ष्मीद्वारा सीताको हत्या ! कटारीमा यस्तै भयो । ३० वर्षीया सीता राईले मरुवा बस्ने लक्ष्मीको चक्कु प्रहार गरेर हत्या गरेकी हुन् । हत्या गरी फरा सीतालाई
पत्नी हराएर पति हैरान
जवानीमा चढेका र विवाहिता महिलाहरु हराउने क्रम बढ्दै गएको छ । नेपाल प्रहरीको इन्टरपोल सेक्सनले जारी गरेको कुल तीन सय ३३ हराएकाहरुको सूचीमा दुई सय ११ महिला छन् भने पुरुषको
नेपाल प्रहरीमा मौलाउँदै बेथिती, बर्दीकै अपमान
वैशाख २८, काठमाण्डौ । अपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने र सामाजमा शान्ती सुरक्षा कायम गर्ने दायित्व राज्यले नेपाल प्रहरीलाई सुम्पेकोे छ । तर, यहि प्रहरीको बर्दीमा अपराधिक क्रियाकलाप गरेर प्रहरी संगठनलाई
एसपी पोखरेल डिआईजीमा सिफारिश, आईजिपीका दाबेदार !
काठमाडौं, १९ बैशाख । नेपाल प्रहरीका एसएसपी विश्वराज पोखरेल डिआइजीमा सिफारिस भएका छन्। २०४९ चैतको आफ्नो ब्याचबाट डिआइजीमा सिफारिस हुने पोखरेल एक्ला हुन्। लागुऔषध विभागमा कार्यरत एसएसपी पोखरेलको नाम काभ्रेमा
नेपाल प्रहरीले भन्यो बम्जनलाई समातेर कारबाही गर्छौ -हेर्नुहोस भिडियो
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदीले रामबहादुर बमजनको विषयमा छानविन भइरहेको र दोषि देखिए कारवाही हुने बताएका छन् । कार्यक्रममा प्रवक्ता सुवेदीले बमजनले मान्छे बेपत्ता बनाएको भन्ने उजुरी परेकाले त्यसको सुक्ष्म